Malagasy maro no misedra olana ara-tsakafo ankehitriny. Lasibatra ireo marefo, dia ny zokiolona sy ireo zaza madinika. Maro no mamoy ny ainy noho ny hanoanana. Tao Ankilimarovahatse Fokontany iray any Amboasary Atsimo, izao dia fantatra fa ankizy miisa valo no namoy ny ainy ny faran’ny herinandro teo vokatry ny hanoanana tafahoatra. Miantso vonjy ny mponina any, rahoviana no mba hisitraka « Vatsy Tsinjo » na koa « Tosika Fameno » hisorohana ny fahafatesana mirarakompana noho ny hanoanana.